हेनरी स्टील ओल्कोट, व्हाइट बौद्ध सीलोन
सीलोनका सेतो बौद्ध
हेनरी स्टील ओल्कोट (1832-197 9) आफ्नो जीवनको पहिलो शताब्दीमा एक सम्मानजनक सज्जनको रूपमा 19औं शताब्दीमा अमेरिकाको जीवन बिताउने आशा गरिएको थियो। उनले यूएस गृहयुद्धमा संघीय अधिकारीको रूपमा सेवा गरे र त्यसपछि एक सफल कानून अभ्यास निर्माण गरे। अनि आफ्नो जीवनको दोस्रो शताब्दीमा उनले बौद्ध धर्मलाई बढावा र पुनर्स्थापना गर्न एशिया यात्रा गरे।
हेनरी स्टील ओल्कोटको सम्भावनाको जीवन श्रीलंकामा आफ्नो मूल अमेरिका भन्दा भन्दा राम्रो सम्झना छ।
सिन्धुली बौद्धहरूले आफ्नो स्मृतिमा हरेक वर्ष आफ्नो मृत्युको वर्षगांठमा मोमबत्तीहरू प्रकाश गर्छन्। भिक्षुले कोलम्बोमा आफ्नो सुनको मूर्तिमा फूल प्रदान गर्छन्। उनको चित्र श्रीलंका डाक टिकटों मा दिखाई दिए छ। श्रीलंकाका बौद्ध महाविद्यालयहरूको विद्यार्थीहरू वार्षिक हेनरी स्टील ओल्कोट मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्छन्।
ठीक तरिकाले न्यू जर्सी देखि एक बीमा वकील सीलेन को मनाई व्हाइट बौद्ध बन्यो, किनकि तपाईं कल्पना गर्न सक्छन्, एकदम कथा।
ओल्कोटको शुरुवात (परम्परागत) जीवन
हेनरी ओल्कोट सन् 1832 मा नारंगी, न्यु जर्सीमा जन्मिएको एक परिवारले पुतित्यान्सनबाट निस्क्यो। हेनरीका पिता एक व्यापारी थिए, र ओल्कोट्स प्रेस्बीबेरियनहरू थिए ।
न्यू यॉर्क हेनरी ओल्कोट शहर को कलेज को भाग लेने पछि कोलंबिया विश्वविद्यालय मा प्रवेश गरे। आफ्नो बुबाको व्यवसायको विफलताले उनलाई स्नातक बिना कोलम्बियाबाट हटाउन सकेन। उहाँ ओहियोमा आफन्तका साथ जिउँनुभयो र खेतीमा रुचि राख्नुभयो।
उहाँले न्यूयर्क फर्कनुभयो र कृषि अध्ययन गर्नुभयो, एक कृषि विद्यालयको स्थापना गर्नुभयो र चिनियाँ र अफ्रिकी शर्कराको बढ्दो प्रकारमा एक राम्रो पुस्तक प्राप्त गर्नुभयो। 1858 मा उनले न्यूयर्क ट्रिब्यूनको लागि कृषि संवाददाता बने। 1860 मा उनले न्यु योर्क, न्यू रोकोलेलमा ट्रिनिटी एपिस्कोप चर्चको रेक्टरसँग विवाह गरे।
सिभिल युद्धको सुरुमा उहाँले सिग्नल कोरमा सूचीबद्ध गर्नुभयो। केही युद्धक्षेत्र अनुभव पछि, उनी युद्ध युद्धका लागि एक विशेष आयुक्त नियुक्त गरे, भर्ती (उत्पीडन) कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचारको खोजी। उनी कर्नलको पदमा पदोन्नति भए र नौसेना विभागलाई नियुक्त गरे, जहाँ ईमानदारी र उद्योगको लागि उनको प्रतिष्ठाले उनलाई विशेष आयोगमा नियुक्त गर्यो जसले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको हत्या गर्यो ।
उनले 1865 मा सैन्य छोडे र कानून अध्ययन गर्न न्यूयर्क फर्किन्। उहाँले 1868 मा पट्टीमा भर्ना गर्नुभयो र बीमा, राजस्व, र सीमा शुल्क कानून मा एक सफल अभ्यास विशेषज्ञता पाउनुभयो।
उनको जीवनमा त्यो बिन्दुमा, हेनरी स्टील ओल्कोटले कस्तो उचित विक्टोरियन युग अमेरिकन सज्जन हुनुपरेको थियो। तर यो परिवर्तन गर्ने बारेमा थियो।
आध्यात्मिकता र मेडम ब्लावत्ती
उनको ओहियो दिनदेखि, हेनरी ओल्कोटले एक अपरंपरागत रुचिलाई हानिकारक बनायो - असाधारण । उहाँ विशेष गरी आध्यात्मिकताद्वारा फैलिएको थियो, वा विश्वासले मरेकासँग कुराकानी गर्न सक्छ भन्ने विश्वास।
गृहयुद्ध पछिको वर्षमा, आध्यात्मवाद, माध्यम र सीन्स एक ठूलो जुनून भयो, सम्भवतः किनकि धेरै मानिसहरूले युद्धमा धेरै प्रियजनहरूलाई गुमाएका थिए।
देशभरि, तर विशेषतया नयाँ इंग्ल्याण्डमा, मानिसहरूले एकताभन्दा बाहिर संसार पत्ता लगाउन आध्यात्मिक समाजहरूको गठन गरे।
ओल्कोट आध्यात्मिक आंदोलनमा सम्भवतः सम्भवतः उनको पत्नीको सहभागिता थियो, जसले तलाक खोजे। सन् 1 997मा तलाकलाई दिइएको थियो। त्यही वर्ष उनले वरमन्टोटलाई केही प्रसिद्ध ज्ञात माध्यमहरूमा भेट्न यात्रा गरे, र त्यहाँ उनले हेलेना पेट्रोना ब्ल्लात्त्स्की नामक एक क्रिस्मेटिक मुक्त भावनालाई भेट्टाए।
त्यहाँ सानो थियो कि ओल्कोटको जीवनको बारेमा पारंपरिक थियो।
मैडम ब्लवत्त्ती (1831-1891) पहिले नै साहसिक जीवन बिताएको थियो। एक रूसी राष्ट्रिय, तिनले एक किशोरीको रूपमा विवाह गरे र त्यसपछि तिनको पतिबाट भाग्यो। अर्को 24 वा सो वर्षको लागि, तिनी एक स्थानबाट अर्को ठाउँमा सारिइन्, मिश्र, भारत, चीन र अन्य ठाउँमा समय बिताउन। उनले तिब्बतमा तीन वर्षको लागि पनि जीवन बिताएका दाबी गरेका थिए, र उनले एक नैतिक परम्परामा शिक्षाहरू पाएका थिए।
केही इतिहासकारहरूले युरोपेली महिलालाई 20 औं शताब्दी अघि तिब्बत भ्रमण गरे।
ओल्कोट र ब्लावत्स्कीले एकसाथ मिलेर ओरिएंटलिज्म, ट्रांससिन्टिनिज्जमेन्ट , आध्यात्मवाद, र वेडोन्टा - प्लस ब्ल्लात्त्स्कीको भागमा एक बिट फ्लोम-फ्लम - र यो दर्शन भनिन्छ। जोडाले 1875 मा द थिस्सैलिकल सोसाइटी स्थापना गरे र एक पत्रिका प्रकाशित गरेको थियो, इस्इस को अनावरण गरे , जबकि ओल्कोटले उनको कानुन बिल को भुगतान गर्न को लागी जारी राखयो। सन् 1897 मा उनी अडिहारी, सोसायटीको मुख्यालयमा गए।
ओल्कोटले ब्लावत्स्कीबाट बौद्ध धर्मबारे केहि सिकेका थिए, र ऊ अझ बढी सिक्न उत्सुक थियो। विशेष गरी, उनी बुद्धको शुद्ध र मूल शिक्षाहरू जान्न चाहन्थे। आजका विद्वानहरूले बताउँछन् कि "शुद्ध" र "मूल" बौद्ध धर्मको बारेमा ओल्कोटको विचारले विश्वव्यापी भाइरस र "मनुष्य आत्म-निर्भरता" को बारेमा आफ्नो 1 9वीं सदीको पश्चिमी उदारवादी पारदर्शी रोमांटिकवादलाई ठूलो रूपमा देखाएको छ, तर तिनको आदर्शवादले चमकसाथ जलायो।
अर्को वर्ष ओल्कोट र ब्लावत्त्स्की श्रीलंका भ्रमण गरेपछि त्यसपछि सीलोन भनिन्छ। सिन्धुलीले जोसिलोसँग जोडे। उनीहरूले विशेष गरी रोमाञ्चक भए पछि दुई सेतो विदेशीहरू बुद्धको ठूलो प्रतिमा बुझेका थिए र सार्वजनिक रूपमा अनुमोदन प्राप्त गरे।
16 औं शताब्दीदेखि श्रीलंकाली पोर्चुगलद्वारा कब्जा गरिसकेका थिए, त्यसपछि डचद्वारा, त्यसपछि ब्रिटिश। 1880 सम्म सिन्हाली धेरै वर्षसम्म ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनको अधीनमा रहेको थियो, र ब्रिटिशहरूले आक्रामक रूपले "ईसाई" शिक्षा प्रणालीलाई सिन्धुलीका छोराछोरीहरूलाई बौद्ध संस्थाहरूलाई कम पार्दै धक्का दिएका थिए।
सेतो वेस्टर्नर्सहरूको उपस्थितिले आफैलाई बौद्ध बोलाउन बौद्ध पुनरुत्थान सुरु गर्न मद्दत पुर्याएको छ कि दश वर्षहरूमा आएर औपनिवेशिक शासन र ईसाई धर्मको बाध्यता को लागी पूर्णरुपमा पूर्ण विद्रोहमा परिणत हुनेछ।
साथै यो एक बौद्ध-सिंहलीकरण राष्ट्रवाद आन्दोलनमा हुनुभयो जसले आज राष्ट्रलाई असर गर्छ। तर त्यो हेनरी ओल्कोटको कथा अगाडि बढ्दैछ, त्यसैले हामी 1880 मा फर्कौं।
उनले श्रीलंका भ्रमण गरेझैं हेनरी ओल्कोट सिंहदर बौद्ध धर्ममा विनाश भएको थियो, जसले बौद्ध धर्मको उनको उदारवादी-पारदर्शी रोमांटिक दृष्टिको तुलनामा अन्धाकार र पछाडि देखाएको थियो। त्यसोभए, कहिल्यै आयोजक, उनले आफूलाई श्रीलंकामा बौद्ध धर्म पुन: व्यवस्थित गर्न फेंक्यो।
द थिस्सलीय समाजले धेरै बौद्ध विद्यालयहरू निर्माण गर्यो, जसमध्ये केहि प्रतिष्ठित महाविद्यालयहरू आज छन्। ओल्कोटले बौद्ध केटिज्ज्मलाई लेखेका थिए जुन अझै पनि प्रयोगमा छ। उनले देश समर्थक बौद्ध, विरोधी-क्रिश्चियन मार्ग वितरण गरे। उहाँले बौद्ध नागरिक अधिकारको लागि उत्साहित गर्नुभयो। सिन्हालीले उहाँलाई माया गरे र उनलाई व्हाइट बौद्ध भनिन्।
मध्य 1880 मा ओल्कोट र ब्लावत्स्की बिरुद्ध बिरुद्ध हुँदै थिए। Blavatsky अदृश्य महाराज देखि रहस्यमय संदेश को उनको दावा संग आध्यात्मिक विश्वासीहरु को एक ड्राइंग कोठा आकर्षक हुन सक्छ। उनले श्रीलंकामा बौद्ध विद्यालयहरू निर्माण गर्न यति चासो थिएनन्। 1885 मा उनले भारतको लागि युरोप छोडे, जहाँ उनले बाँकी दिन बिताए, आध्यात्मिक किताबहरू लेखे।
यद्यपि उहाँले अमेरिकामा केही फर्काउने भ्रमणहरू गर्नुभयो, ओल्कोटले भारत र श्रीलंकालाई आफ्नो जीवनका बाँकी घरहरूको लागि विचार गरे। सन् 1 997 मा उनी भारतमा मरे।
भियतनाम मा बौद्ध धर्म
Taoism को परिचय
कयिनले आफ्नो पत्नीलाई कहाँ खोजे?
कर्मा र रिभर
के बौद्धहरूले प्रार्थना गर्छन्?
कुन बुद्धले भगवानको बारेमा भनेन
Future Perfect (Verbs)
Zuppa di Alfabeto: इटालियन संक्षिप्त र परिवेश
रश हाहा के हो?
शेक्सपियर Soliloquy कसरी प्रदर्शन गर्नुहोस्
पढ्नको लागी डिकोडिङ कौशल अभ्यास गर्ने गतिविधिहरू
6 अजीब सृष्टिहरू तपाईं भेट्न चाहनुहुन्न
19औं शताब्दीको ठूलो निन्द्रा
के त्यो मल्ल मर्दलीन वा स्त्रीन हो?
एकाधिकारमा जेल जाँदै गरेको संभावना
कसले आईफोनलाई इन्कार गर्यो?
येशूको चमत्कार: एक डेमोन-पापी ब्वाइजको बहिष्करण
चीन मा तृतीय बौद्ध धर्म
हिल्सडेल कलेज प्रवेश
के म एक रियल एस्टेट डिग्री कमाउनुपर्छ?
एल ताजिन: नेइचेस को पिरामिड
पुन: सूचीबद्ध एसट लेखन र भाषा परीक्षण